Suldaan Cabdiraxmaan Bade Muxuu Sameeyey oo Xilkii Bar-lamaanka Looga Qaaday? – Rasaasa News
Suldaan Cabdiraxmaan Bade waa nin aqoon yahan ah, oo waayo arag ah shaqooyin badana u soo qabtay ummada Somalida Ogadeeniya, gaar ahaana dadka degan gabalka uu u dhashay. Cabdiraxmaan aqoonta uu lee yahay ka sokow waxaa dhalay Suldaan, isguna waa Suldaan oo waxaa uu hayaa Booska Hogaaminta bulshada inta uu nool yahay, Jagadaas oo uu Aabihii Bade ka dhaxlay.
Madaxtinimada Suldaan Cabdiraxmaan Bade ma aha mid u baahan magacaabid ee waa mid dhaxaltooyo, Waayo kolkii uu Aabihii dhintay waa muhiim in la helo ruux badala Aabihii oo beesha ku hogaamiyo garsoor cadaalad ku dhisan go,aamiyana khilaafyada soo kala dhex gala Qaabaa,ilada degan dhulka Somalida Ogadeeniya iyo waliba xukuumada Itobiya. Waayo waa Caaqil, caaqilkuna waxaa uu had iyo goorba ka shaqeeyaa wanaaga bulshada isga oo ku haygaya garsoor cadaalad ku dhisan.
Shaqada Suldaanimada oo ah mid aan mushaar lahayn ayaa hadana uu ku qasban yahay in uu hayo, kolba hadii ay dadku jeclaadaan in uu u noqdo Suldaan. Waxaa kale oo uu masuul ka yahay in uu abuuro nolosha qoyskiisa sida uu ruux waliba masuulka uga yahay qoyskiisa.
Hadaba, Suldaan Cabdiraxmaan Bade waxaa uu ka mid noqday mudanayaasha baarlamaanka ee degmanada Jijiga, sida caadiga ah [waa hadii ay Itobiya ka jirto] waxaa xubinka soo doorta dadweynaha degaanka uu doonayo in uu ka soo galo baarlamaanka [Constituency]. Waxaanan filayaa in ay dadweynaha magaalada Jijiga ay soo doorteen Suldaan Cabdiraxmaan Bade, waa sharciga uu aduunku raaco,e xubinka Baarlamaanka ah waxaa uu xilkiisa ku waayi karaa oo kaliya in uu isagu iskiis is casilo, In uu dhinto iyo in doorashada xigta lagaga adkaado.
Hadaba, waxaa bogga rasaas.com soo gaadhaya warar sheegaya in xilikii ku xigeenknimada baarlamaanka laga qaaday Suldaan Cabdiraxmaan Bade, isla markaasna laga qaaday xubinimadii baarlamaanka ee Kilalka 5aad. Waxaana xilka ka qaaday baa la lee yahay kulan ay bar-lamaanka Kilalku isugu yimaadeen Jijiga oo lagu qiimaynayey waa sida la yidhiye Ba-lamaanka laftigiisa, yaab!. Waxaa laga qaadi karaa xilka ku xigeenimada, waayo waa xil uu baarlamaanku u dhiibay, waxaanse marna laga qaadi karin xilka Baarlamaanimada oo ay dadweynuhu u dhiibeen.
Waa wax caadi ah in uu baarlamaanku kulmo si loo ansixiyo sharciyo laga dooday, in laga doodo sharciyo ay xukuumadu doonayso in lagu soo kordhiyo sharciyadii hore ee jiray, in laga doodo miisaaniyada sanadka cusub, in laga doodo wax qabadkii miisaaniyadii sanakii hore iyo in laga doodo wax qabadka xukuumada ee ku saabsan degaanka.
Waxaa kale oo ay xubnaha Baarlamaanku si guud iyo si gaarba ugu soo bandhigi karaan xukuumada in ay wax ka qabato degaanada ay ka soo jiidaan baahida dhibaato ee ka jirta.
Hadaba, ma aha Baarlamaanka degaanka Somalida Ogadeeniya mid ah, Baarlamaan dhab ah ee waxaa weeye [Bar-lamaan], Waxaa keena xubinimada Bar-lamaanka saraakiisha ciidamada Tigray, kolka ay Jijga yimaadaana waxaa wada xukuma Towelde iyo Abay Tsehaye oo labadoodunba ah laba nin oo reer Tigray ah.
Baarlamaanka Degaanku waa xoog awood leh oo matali kara dhulka Somalida Ogadeeniya, waa hadii ay raacayaan sharciga, waxayna si wada jir ah ula hadli karaan dawlada Federalka ee Itobiya iyaga oo aan waxba u dhimaynin sharciga dalka u yaal. Si ay isaga celiyaan saraakiisha hortaagan horumarka dhulka Somlaida Ogadeeniya ee maalinba mid si sharcidaro ah uga caydhinaya masuuliyada ay dadweynuhu u dhiibteen.
Somalidu waxay ku maahmaahdaa “waa laggaaga dari hadal looma daayo”, ha ogaadaan in ay matalaan dadweynaha, hana ku hadlaan afka dadweynaha iyaga oo ilaalinaya sharciga dalka u yaal.
Haddii ayna midaas samayn karin, waxaa khalad ah in ay sheegtaan xubno Baarlamaan, waana in ayna hoosaasin dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Waxaa loogu caga jugleeyaa waxaad taageertaan Jabhadaha ka dagaalama dhulka Somalida Ogadeeniya, hadiiba ay taageeri lahaayeen Jabhadaha waxaa xaqiiq ah in Jabhaduhu ay ka dhex dagaalami lahaayeen Magaalada Jijiga iyo Dire Dawa. Arintaasina waa in ay u arkaan caga juglayn ay saraakiisha ciidamad Tigay ku hayaan, Baarlamaanka oo iyagu u taagan dharaar iyo habeenba dhismaha dhulka Somalida Ogadeeniya.